Ogaden News Agency (ONA) – Guul- Jiilalkii abdid ugu firfircoonaa ayaa ukacay xoreynta Ogadeniya, kanxoow Nafta waa! By: Xaaji M/rashiid
Guul- Jiilalkii abdid ugu firfircoonaa ayaa ukacay xoreynta Ogadeniya, kanxoow Nafta waa! By: Xaaji M/rashiid
Posted by Daljir	/ November 28, 2017
Rabigeen SXWT wuxuu si cad usheegay in cidii Nicmo la siiyo ee ka shugri naqda loo siyaadinayo, Sidaa daraadeed waxaan marka koowaad leeyahay Eeboow mahadaa, hadiiba aad Dadkeyga Dulmane si qoto,dheer ufahansiisay danahooda, isla markaana aad kasoo dhex saartay todobada jiil een hoos ku qeexi doono.
Siday la socdaan inta Garaadka iyo garashada leh waxaa meel wanaagsan maraya halganka qori isu dhiibka ah ee ay daadihinayaan Halyeeyada ka dhashay Somalida Ogadenya. Waxay kasoo dhalaaleen hawshii ay isu xilsaareen 20 sano kahor, kadib markay wacad ku mareen inay si cad ula dagaalami doonaan Ururka woyaanaha ee ku duulay dalka Ogadenya! waxgaradka halganka oo isku dhaarsaday Geedo hoostood ayaa wali ku taaagan tubtay maalintaa jeexeen.
Dadaalkaas faraha badani wuxuu keenay inay daaleen kooxdii woyaanha ee sida isla waynida ah ugu duulay Mandiqada. Kooxdu waxba mayna iska hagranin oo waxay isticmaaleen Balaayiin doollar, kumaan kun oo Maleeshiyo, saxaafado luqado kala duwan ku hadlaya iyo hub aad ufara badan. Waxaa kale oy adeegsadeen dhuuniqaatayaal ku caawiya soo qaqabashada taageerayaalka halganka ee ku sugan Soomaaliya. Dadkeygoow waxaad ogaataan inuuna Taliskaasi waxba iska hagranin, isla markaana aysan jirin awood u hadhay oo usoo socota.
Al-xamdu Lillaah waxaa gacmaha is qabsaday oo isu taagay xoreynta Ogadenya todoba Jiil oo wacdaro ka muujiyay saaxada dagaalka, midda siyaasdda, midda saxaafadda iyo meelo kale. Todobada Jiil waxay kala yihiin- Da’aha Labaatanaad, Sodonaad Afartanaad, Kontonaad, Lixdanaad iyo Todobaatanaad. Hal kulan ayay wada qabsadaan, wayna wada fikiraan, kadibna hal go’aan ayay wada qaataan. Sidaan isleeyahay taasaa sababtay inay sii jiraan cadowguna ku jaah,wareero!
Hadaba hal arrin aynu isla fahano aniga iyo idinkuba. Shay kasta oo Dunida yaala wuxuu mudan yahay in lakala hufo ama lakala shaandheeyo. Kasoo qaad Dahabka- goormuu dahab noqdaa? waa markii lagubo ee aad loo tumo, qashirkana laga saaro. Haday Beertu soo go’do maxay sameeyaan dadkii lahaa? intay soo tuulaan ayay Qoolal maskaxda kala dhacaan! taasi waxay keentaa inay firidii banaanka timaado oo si sahlan looga soo dhex saaro! wixii qashin ahaa isagu qiimo maleh oo waxna daabayshuu raacaa waxna xoolihiibaa ku cawaysima! Markii Xoolaha Seyladda lakeeno siday wax u dhacaan? Ruux waliba wuxuu hayay ee xoolo ahaa ayuu soo tubaa, hase ahaatee kii lacagta lahaayi wax walba iskama iibsanayo ee intuu isha mariyo ayuu wixii wanaagsan ka beecsadaa. Dadkii xoolaha liita keensaday wax laga gato iska daaye waxaa dhacda inay casarkii Sayladda ka caraabaan iyagoo qadadii iyo shaahiiba daynsaday,kkk.Waxaan uga jeedaa inay shacabka Ogadenya garwaaqsadaa in xagga Rabi laga kala hufayo inta uu halganku socdana kala shaandheyntu way soconeysaa. Dad meel lagu ogaa ayaa baneynaya, dad loo han waynaa ayaa hoosta kasiibanaya! meesha dad kale oon laguba xisaabtami jirin ay wacdaro ka muujinayaan Goobaha halganka.
Waxaa socda maamul Rabaani ah ee ruux waloowba Alla baryo inuuna Ilaahay karaamada kaa ceshanin. Kahor intaadan dadka ku mashquulin, adigu isku mashquul! Kahor intaadan dadka abaabulin, adigu is abaabul! kahor intaadan dadka canaan, adigu is canaano! kahor intaadan dhaqaale qaadin adigu iska qaad!
sikastaba ha ahaatee, isku soo wada duuboo waxaa saaxada siyaasadeed ee Caalamka iyo Itoobiyaba meel sare kaga jira jiilalka firfircoon een soo xusay Guushana way hanan doonaan insha Allaah.